एमाले एकता कार्यदलले गर्‍यो १० बुँदे सहमति: यसको सन्देश के ? - Mero Tribune
Home ON POINT एमाले एकता कार्यदलले गर्‍यो १० बुँदे सहमति: यसको सन्देश के ?
एमाले एकता कार्यदलले गर्‍यो १० बुँदे सहमति: यसको सन्देश के ?
नेकपा (एमाले) एकता कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरेको छ ।लामो रस्साक्सीपछी अन्तत यो सहमती भएको हो । अब सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरिदिने हो भने पनि फेरि एमाले नेतृत्वकै सरकार बन्ने देखिन्छ किनभने एमालेलाई सरकार बनाउन जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष भए पुग्छ। यो नभएर चुनाब भए पनि एकतको सन्देश लिएर चुनाबमा जान एमालेलाई सजिलो हुन्छ ।
Previous articleArgentina beat Brazil 1-0 to win Copa America, 1st major title in 28 yrs
Next articleप्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवाको इनिङ